ARRAAS BORUUS GOOTOONNI WARRAAQSA QABSOO OROMOO QEERROO BIYYA KEESSAATI! (Saphaloo Kadiir irraa) – Beekan Guluma Erena
ARRAAS BORUUS GOOTOONNI WARRAAQSA QABSOO OROMOO QEERROO BIYYA KEESSAATI! (Saphaloo Kadiir irraa)	Beekan Erena
Politics Category October 9, 2016o, romoprotests
ARRAAS BORUUS GOOTOONNI WARRAAQSA QABSOO OROMOO QEERROO BIYYA KEESSAATI!
Gariin namaa ilaalchaafi yaada akkam akka guduunfatee deemu yoon hubadhu na gaddisiisaas, yeroo gariis immoo na aarsa. Dhugatti nama tulluu guddoo mul’attu qeeydii hanga shanachaatiin haguuguuf yaalu tokko yoo agartan maal jettaniin isin? Ani gama kiyyaan osuma akka maraataatti na ajaa’ibsiisuuti, akka gowwaattiis na aarsa. Gowwaan maaliif si aarsa akka naan hin jeennee hadaraa. Naan jettaniis gowwaan waanuma nama aarsu malee waan nama gammachiisu hanga firii xaafii hojjachuu hin beeku waan taheef nama aarsa. Nama aarsuu malee nama araarsuu hin beeku kaa gowwaan. Waa malee gowwaa kana hin balaaleeffadhu bar yaa ambayyoo. Yeroo mara gowwuma keenya kan daafanaa ambaa jala eegee wix-wix godhuutu nu galaafachaa ture waan taheefi. Mata duree barruu kootii kana “Arraas boruus gootoonni warraaqsa qabsoo qeerroo biyya keessaati!” jedhee yoon jalqabu waa hedduun argeefi dhagaye irraa ka’eetiin filadhe. Gariin namaa (kan akka kiyyaa) sodaaf zaraaraa manaa jalaaa fagaatee, abaada qaxxaamuree bakka biraa osoo jiruuti warraaqsa biyya keessaa kana akka waan inni bu’uree, ijaaree, sochoosaafi kabaatiis jiruu of fakkeessuuf dhuundhum torba ol hiixata. Arraba isaa hanga karabaatii of keessaa harkisa. Ani kan jedhu, barana namni hojjaafi dandeettii isaa malee ol harkifachuu maaf jaalataa? Ofii ol hiixachuun mudhii nama kuttiin gurra isaaniirra bahee hin beekuu fakkaata.
← Re articulating the Oromo liberation objective is not consensus building By Rundassa Asheetee
OROMIA: THE ESCALATION OF GENOCIDE: Bulbulaa Tufaa ( Member of Gadaa Meelbaa) The Root of the Genocide →